Mmelite Youtube na-ekwuputa akụkọ maka 2021 | Gam akporosis
A na-emelite Youtube ma kpọsaa akụkọ maka 2021
Nnukwu nnukwu ikpo okwu Google, Youtube, na-agbanwe na ịkụ nzọ na-emegharị onwe ya. N'afọ gara aga, anyị hụrụ mmelite dị ukwuu ọkpụkpọ na kwukwara nhọrọ a hụtụbeghị na Youtube. Ọzọkwa, A na-ekwuputa akụkọ ga-abata maka ndị ọrụ Youtube n'ime afọ 2021, anyị amatakwala ihe ụfọdụ n’ime ha ga-abụ.
Akụkọ na-aga ezubere iche n'akụkụ abụọ nke Youtube. Nke ahụ bụ, anyị na-ahụ ndozi maka ndị ọrụ nke onye ọkpụkpọ dị ka ndị nkiri. Ma a ga-enwekwa ndozi maka ndị na-emepụta ọdịnaya site na ntinye nke akụrụngwa akụrụngwa. Na ụfọdụ ngwaọrụ ọhụrụ iji nweta nhọrọ ka ukwuu nke jikwaa monetize ọdịnaya.
1 Youtube gara n'ihu na-agbanwe na 2021
1.1 Ozi maka ndị ọrụ (ndị na-ekiri):
1.2 Akụkọ maka ndị okike
2 Youtube ga-aka mma na 2021
Youtube gara n'ihu na-agbanwe na 2021
Na 2020 anyị nwere ike ịhụ otu YouTube si tinye nhọrọ iji dekọọ vidiyo ngwa ngwa na usoro eserese naanị maka mobiles. Anyị nwekwara ike ịhụ HDR mma dị ndụ. Akụkọ a mara ọkwa maka 2021 ugbu a abụghị ole na ole. Na ebumnuche ịmepụta ahụmịhe ka mma maka ndị ọrụ Youtube, anyị ga-ahụ akụkọ ndị dị mkpa dị ka nke anyị na-agwa gị.
Ozi maka ndị ọrụ (ndị na-ekiri):
Mfe igodo. Ọ bụrụ na ọ dịlarị mfe ịnyagharịa YouTube, yana mmelite ọhụrụ ahụ, ndị mmepe ahụ kwere nkwa na ha ga-adị ọbụna dị mfe nghọta karị. N'etiti usoro mgbanwe, a ihe ọkpụkpọ ọhụụ maka mbadamba. Otu n’ime ndị echefuru echefu na mmelite ikpeazụ nke emere ka echiche dị iche iche banyere onye ọkpụkpọ ahụ maka kọmputa na nke dị iche maka smartphones.
Ndakọrịta karia. Anyị achọtabeghịkwa nnukwu ihe mgbochi ọ bụla mgbe ọ bịara ịmepụ ụdị usoro ọ bụla na YouTube. Oge a ka ọ ga-elekwasị anya n’inwe ike inye ọdịnaya ndị ọzọ na eziokwu dị adị. Ma ikwado nweta ihe ọkpụkpọ ahụ site na ngwaọrụ dị iche iche ya na intaneti dika ihe nlere vidiyo.
Egwu Youtube. Otu n'ime ụlọ ọrụ siri ike nke Google maka iweghara ndị ọrụ nke ndị egwu egwu bụ YouTube Music. Ọ bụghị n'efu ka o nwere ihe karịrị nde 70 egwu ndị isi. Na ọhụrụ melite, ahụmahụ ndị yiri nnọọ ndị anyị nwere ike ịhụ na Spotify na-ekwe nkwa, dị ka ike listi ọkpụkpọ. Anyị nwere ike ịga n'ihu ndepụta ndị ewu ewu kere ndị ọzọ ma a ga-enwe ngalaba nke music depụtara na ụzọ dị iche iche, dị ka ọnọdụ uche.
Kidsmụaka Youtube. Ihe ikpo okwu vidio emere maka umuaka n'oge na-adighi anya ghọrọ ezigbo ihe ịga nke ọma. Na ihe nzacha nke jikọtara ọdịnaya niile dị ka ọkọlọtọ nke ahụ na-akọrọ bụ udo nke uche maka nne na nna. Ugbu a, a ga-etinye ha ọhụrụ customization ngwaọrụ ọbụna karị ụdị ọdịnaya nke ụmụntakịrị nwere ohere, yana amachi oge eji ikpo okwu. Na-anabata mmelite mgbe niile n'ụlọ niile na ụmụaka.
Akụkọ maka ndị okike
nịịka. N'ihi mgbagwoju anya enwere ike ibugo vidiyo na YouTube nwere ike ibute ụfọdụ ndị ọrụ, a ga-etinye ọrụ ọhụrụ. A usoro ọhụụ akpọ «nịịka». Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ maka Obere vidiyo anyị nwere ike ịdekọ ozugbo na mkpanaka ma bulite ha n'oge ahụ. Testdị nyocha ugbu a na India ebe ọ bụ ezigbo mgbanwe.
Enyemaka azụmahịa. Lọ ahịa ejirila ngwa ngwa rụọ ọrụ n'oge ọ bụla. Ihe ndi mmadu mejuputarala bu eziokwu na anyi agbaala ososo karia ka anyi chere, n'ihi onodu puru iche ndi tara ahuhu na 2020. Site na mgbasa ozi mgbasa ozi na mmemme mmemme YouTube ndị okike na ndị mgbasa ozi ga-enweta ụzọ ka ukwuu iji monetize ọdịnaya gị.
Ejikọtara ọnụ. Dị ka anyị na-ekwu, mmezi ọfụma na digitization nke azụmaahịa emeela ka nnukwu uto na ịzụrụ dijitalụ site na ịntanetị. YouTube abụghị onye ọhụụ na uto a dị egwu. A na-arụ ọrụ na ntinye nke ụzọ ọ ga-esi kwe omume kwe ka ndi oru mee zuo ahia site na ndi okike.
Youtube ga-aka mma na 2021
Dịka anyị nwere ike ịhụ, Google anaghị ekwe ka ndị dike ya zuru ike na ọrụ ha. Ihe akaebe nke a bụ mmepe na ndozi mgbe niile karịa Youtube na-ewetara anyị afọ 2021. Mgbanwe olee otu anyi ga esi gwa gi ga-emetụta ndị ọrụ Youtube na ndị okike ọdịnaya n'onwe ha. Ọ na-amasị anyị ịhụ otú ngwa ọdịnala si arụ ọrụ iji nọrọ oke. N'ime afọ a niile, anyị ga-ahụ etu mmezi ọkwa ekwuputara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-emelite Youtube ma kpọsaa akụkọ maka 2021
Realme GT 5G ga-arụ ọrụ na Machị 4: ọ nwere ike ibute na ngwa ngwa 125 W